တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အောက်စ်ဖို့ဒ် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
ဧပြီလ ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။
အောက်စ်ဖို့ဒ် ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရက ကြီးမှူးပြီး ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကပ်ရအောင် မနေ့ကတည်းက လုပ်ထားတဲ့ ကြက်ဥရေညှိပေါင်းနဲ့ ဒီမနက်စောစောထပြီး သုပ်ထားတဲ့ ပဲကြာဆံသုပ် (သက်သတ်လွတ်) ယူသွားခဲ့တယ်။ နှစ်မျိုးလုံးက ချော (အစိမ်းရောင်နယ်မြေ) ရဲ့ နည်းတွေပါပဲ။ ကြက်ဥပေါင်းနေရင်း မသိလို့ ချောကို လှမ်းလှမ်း မေးရသေးတယ်။ (အဲဒီအတွက် ချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
မခဲမချင်း ဇွဲတင်းပြီးပေါင်းရလေသော ကြက်ဥရေညှိပေါင်း ...
အောက်စ်ဖို့ဒ်ရောက်တော့ နေ့လည် ၁၁ နာရီ။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းမစားခင် အချိန်မီ ရောက်သွားလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
သံဃာတော် ၁၁-ပါးက ခန်းမထဲမှာ တန်းစီပြီး ဆွမ်းခံကြွကြတယ်။
သံဃာတော်အား ဆွမ်းများလောင်းရန် တန်းစီဟန် ...
သံဃာတော်က ၁၁ ပါး လူတွေက အများကြီးမို့ သံဃာတော်တွေက ခန်းမကို နှစ်ခါပြန်ပတ်ပြီး ဆွမ်းခံပေးရတယ်။
သပိတ်ထဲ ပြည့်သွားရင် ဘေးကလိုက်တဲ့ ကပ္ပိယက ဆွမ်းတွေ လိုက်သိမ်းပေးပါတယ်။ လူငယ်လေးတွေ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ပေးနေကြတာ ကြည့်ပြီး အားရကျေနပ်မိပါရဲ့။
ဆွမ်းဟင်းပွဲတွေကလဲ မနည်းမနောပါဘဲ။ များသောအားဖြင့်ကတော့ ထိုင်း အစားအစာတွေပါ။ (ထိုင်းစာတွေက အရမ်းစပ်တယ်၊ သေလောက်အောင် စပ်တယ်) ဆရာတော်တချို့က သက်သတ်လွတ် ဘုဉ်းပေးတာမို့ သက်သတ်လွတ် ဟင်းပွဲတွေလဲ အများကြီးပါပဲ။
ဆွမ်းမစားခင် ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈယ်တော့ အောက်စ်ဖို့ကျောင်းထုံးစံအတိုင်း ပါဠိကို ထိုင်းပုံစံရွတ်ကြတယ်။ အဖြတ်အတောက် အဆွဲအငင်တွေက ကြားနေကျပုံစံမျိုး ရင်းနှီးမှုမရှိလို့ လိုက်မရွတ်ဖြစ်ဘူး။
ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတော့လဲ အောက်စ်ဖို့ဒ် ကျောင်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သပိတ်နဲ့ပဲ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြတယ်။ ညာဘက် အစွန်ဆုံးက ဘုန်းကြီးက တလောက ရေသိမ်မှာ သိမ်ဝင်ပြီး ရဟန်းခံခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီးပါ။ သူက လူဘ၀က ဒေါက်တာဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ သူတယောက်။ ပရိုဖက်ရှင်နယ် ပုံပြောသူ (story teller) လဲ လုပ်ခဲ့ဖူးသတဲ့။ ဒီပွဲမှာလဲ ပုံပြင်တပုဒ် ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းအကများ ဖျော်ဖြေသွား ...
ထိုင်းလှပျိုဖြူလေးတွေက သူတို့ရိုးရာ ထိုင်းအကနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေသွားကြတယ်။ ဘယ်တော့များ တူးပို့သံနဲ့ မြနန္ဒာသီချင်းဆိုပြီး မြန်မာမလေးတွေ ကဦးမှာလဲလို့ မျှော်နေခဲ့မိပေမဲ့ ... ... ။
ရှမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ကိန္နရီအကပါ။ ဟိုးဘက်မှာ ရှမ်းအိုးစည်ရှည်ကြီးနဲ့ မောင်းလေးတွေ တထုံထုံထုပြီး အကကို ပံ့ပိုးပေးကြတယ်။
အောက်စ်ဖို့ဒ်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဆရာတော် ဦးဓမ္မသာမိက တရားမဟောခင် အားလုံးကို ၃ မိနစ် အာနာပါန ရှုမှတ်စေပါတယ်။ ပြီးမှ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း သုံးဘာသာနဲ့ နှစ်သစ်ကူး တရားဟောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ပြောသွားတာလေးက မှတ်သားစရာပါ။ နှစ်သစ်ကူးမှာ အညစ်အကြေးတွေ စင်ကြယ်စေဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေလောင်းကြတယ်။ တကယ်တော့ ရေနဲ့ အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောသန့်စင်တယ်ဆိုတာ အလွန်ဆုံး ၁၂-နာရီပဲ ခံပါသတဲ့။ ပြီးရင် ပြန်ညစ်ပတ်တာပဲ။ တကယ်တမ်းက တနှစ်ပတ်လုံး မဆေးမကြောလို့ ညစ်ထေးနေတဲ့ မိမိစိတ်ကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြောရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ စိတ်စင်ကြယ်စေဖို့က မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားတဲ့ သမထ/ ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ဆေးကြောကြရမယ် ... အဲဒီလိုဆိုရင် နေ့တိုင်းဟာ နေ့အသစ် အရုဏ်ဦး၊ နေ့တိုင်းဟာ နှစ်သစ်ကူး၊ နေ့တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်မယ် လို့ ဟောကြားသွားပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ တခြား သံဃာတော်တွေ အနည်းအကျဉ်း ပြောဟောပြီးတဲ့နောက် သာဓုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပြီး ကျမတို့လဲ ပြန်လာခဲ့ကြတယ်၊ အခမ်းအနားကတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ ဘုရားရေသပ္ပါယ်မယ့် အစီအစဉ်တွေ ကျန်သေးတယ်လို့တော့ သိရတယ်။ တခြားဘာတွေလုပ်အုံးမလဲ မသိပေမဲ့ အတူသွားတဲ့ အန်တီတွေ အန်ကယ်တွေက နောက်တနေရာ ဆက်ကြအုံးမှာမို့ ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ တူးပို့သံ မညံ မြန်မာဟန်ကင်းဝေးတဲ့ ဒီပွဲတော်က ကိုယ့်ဒေသကို လွမ်းနေတဲ့ ကျမအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု မရနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ကုသိုလ်တွေတော့ ရလိုက်ပါတယ်လေ ... လို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဖြေသိမ့်ရင်း ... အောက်စ်ဖို့ဒ်ကို ကျောခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
၁၁၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၁
Posted by မေဓာဝီ at 12:54 AM
Labels: သင်္ကြန်, အမှတ်တရ
That's right little sis.We do need to wash our mind by meditation.For the time,we can't wash our miss to home as ordinary human being:(
4/11/2011 1:45 AM
4/11/2011 5:12 AM
ဘိနပ် မချွတ်ဖဲ ဆွမ်းလောင်းကြတာလဲ ဓါတ်ပုံထဲ မြင်လိုက်သလိုဘဲ၊ မျက်စေ့များ မှားသလားမသိ။
4/11/2011 5:42 AM
မမရေ ပြန်လည်မျှဝေပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးပါလို့... ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေမမ။
4/11/2011 7:20 AM
4/11/2011 7:40 AM
တူးပို့သံနဲ့ မြနန္ဒာသီချင်းဆိုပြီး မြန်မာမလေးတွေ ကဦးမှာလဲလို့ မျှော်နေခဲ့မယ့် အတူ ကိုယ်တိုင်ဝင်နွှဲလိုက် ပြီးတာပဲကို အစ်မကလည်းး))
ကုသိုလ်တွေအများကြီး ရမှာပဲ သာဓု ခေါ်သွားပါတယ်ဗျာ ။
4/11/2011 8:22 AM
ဘုန်းကြီးတွေ ဘူဖေးဘုန်းပေးတာ ဝိနည်းမလွတ်ဘူးနဲ့ တူတယ်နော်
4/11/2011 8:37 AM
ဝေးနေချိန်တွေမှာတော့ ဒီလိုပါပဲ မမေဓာဝီရာ...၊ ရသလောက်နဲ့ ရသေ့စိတ်ဖြေ ပဲပေါ့လေ၊ ဒီမှာဆို သင်္ကြန်ရက်တွေကို လုံးဝ သတိမထားမိခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ အများကြီးပဲ၊ ဘလော့ဂ်တွေ ဖတ်နေမှသာ ပြန်ပြန်သတိရ မိတာ..၊ တူးပို့နဲ့ မြနန္ဒာရဲ့ သင်္ကြန်အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ချက်က အရမ်းပဲ အံ့သြဖို့ ကောင်းလှတယ်နော်၊ ဆရာတော် ဟောတဲ့ တရားကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တိုတိုတုတ်တုတ် ထိမိတယ်၊ မျှဝေတာလည်း ကျေးဇူးပါနော်...။
4/11/2011 9:03 AM
ပုံတွေကြည့်သွားပါတယ်၊ ကုသိုလ်လုပ်သူများကို သာဓုခေါ်ပါသည်၊
4/11/2011 9:39 AM
4/11/2011 9:40 AM
ကျနော်လည်း ဘိနပ် မချွတ်ဖဲ ဆွမ်းလောင်း နေကြတာ မြင်မိသလားလို့
နိုင်ငံခြားရောက်လို့ မေ့များသွားကြလေသလား ဘုန်းဘုန်း တို့ကတော့ ချွတ်ထားပါတယ် (ဘိနပ် ဘိနပ်)
4/11/2011 12:17 PM
4/11/2011 2:07 PM
Shan and Myanmar are not the same? Pls try to love your Shan as Myanmar.
4/11/2011 4:04 PM
I'd like to consider Shan as Myanmar. But I've seenanumber of Shan monks who have studied in Sri Lanka. They studied Buddhist scriptures in famous Sathin-taiks in many gib cities of Myanmar. They hold Myanmar passports. They receive sponsor as Myanmar monks given by Dana Sri Lanka based in Singapore.
But the thing which is regretful is they say they are Thai monks to any foreigners including Sri Lankans. I'm sure this is the truth. I personally experienced three monks.
Here also why couldn't they putaBurmese item (a bout 5-7 minutes) on the programme.
This is justaclue to consider for both groups. There must be something wrong. I don't like to mention this in detail in the new year celebration.
A certain monk
4/11/2011 9:06 PM
4/11/2011 9:16 PM
Let's doom together said...
Hey Anonymous (4/11/2011 9:06 PM)
Can't you even differentiate Thai and Tai? Thai=ထိုင်း=Thailand ppl. The Monks might have said themselve as Tai (တံ;=တိုင်း=ရှမ်း). Don't you know that? This shows that Burmese never know about Ethnic group and never regard them as thier own ppl. The more I read Burmese blogs, the more I know about how Burmese ppl perception on Ethnic group. That's the reason why Myanmar(our country) is doomed, dooming and will be doomed forever. Shame on you. Doubt "Second ပင်လုံ" will be successful. Your beloved Aunty Su Kyi's plan will be failed and She will be doom forever with Myanmar(alreadyadoomed country). Let's carry on dooming together.
4/12/2011 3:26 AM
ှုသာဓု သာဓု သာဓုခေါ်ပါတယ် မမမေ။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အတာသင်္ကြန်မှာ အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
4/12/2011 3:39 AM
အားလုံးပဲ ... မှတ်ချက်လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမဆိုလိုချင်တာက မြန်မာရယ် ရှမ်းရယ် ခွဲခြားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နဂိုက မျှော်လင့်ခဲ့သလို သင်္ကြန်သီချင်း သင်္ကြန်အကတွေ မတွေ့မမြင်ရဘဲ ထိုင်းအငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ ဒီပွဲလေးကို စိတ်ထဲ အားမရဖြစ်မိတာ တခုပါပဲ။ မပျော်ဘူးလားဆိုတော့ ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ရှမ်းဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းဖြစ်ဖြစ် ဒီပွဲလာကြသူ အားလုံးနဲ့ တသားထဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီပွဲက မြန်မာနှစ်ကူးပွဲသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာတော်ကလဲ ပြောသွားပါတယ်၊ မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာ ကျရောက်မယ့် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ သိရိလင်္ကာတို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲကို ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်က မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာသင်္ကြန် မြန်မာဟန်နဲ့ မြန်မာအငွေ့အသက်ကို လိုလားတောင့်တမိတဲ့အတွက် စိတ်အဆာမပြေ ဖြစ်ခဲ့တာကို ရေးလိုက်မိတာပါ။ ခွဲခြားလိုစိတ်နဲ့ မဟုတ်ရကြောင်းပါရှင် ... ။
ck နဲ့ မရွှေစင်ပြောသလို ဖိနပ်မချွတ်ဘဲ ဆွမ်းလောင်းကြသူ တချို့ကို ကျမလဲ သတိထားမိတယ်။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ချွတ်ရခက်လို့ပဲ နေမှာပါလေ ... လို့ တွေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမတော့ ချွတ်ပါတယ်။ (ဖိနပ်)
ချွတ်ရလွယ်အောင်လဲ ကတ္တီပါခြေညှပ်ဖိနပ် စီးသွားခဲ့တယ်။
Anonymous ပြောတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဘူဖေးစားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဆရာတော်ကို ကြိုပြီး စားပွဲလိုက် ကပ်ထားတဲ့အတွက် ၀ိနည်းနဲ့ ညီပါတယ်။
စာလာဖတ်သူများ အားလုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ် သင်္ကြန်နဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ကြပါစေရှင် ... ။
4/12/2011 6:25 AM
4/12/2011 11:30 AM
မြန်မာပြည်ရဲ့ အဝေးရောက်နေသူတွေအဖို့တော့ ဒီလို အမှတ်တရပွဲမျိုး ရှိတာကိုပဲ ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။
မဏ္ဍာပ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး သူများတွေ ရေပက်တာ ရေပက်ခံတာတွေကို ထိုင်ကြည့်နေချင်မိတယ်။
4/12/2011 2:44 PM
ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း ရေလာလောင်းပါတယ် အမရေ...
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေကြတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် အလွမ်းပြေလေးပေါ့...
4/13/2011 6:57 AM
ရေခဲရေနဲ့ လာလောင်းပါတယ်၊ ရင်ကိုအေးမြစေသား ဆုတောင်းများပြည့်စေသတည်း။
4/13/2011 8:09 AM
Phone Gyi can watch those dance?
4/15/2011 1:12 AM
I think they are not dancing for Phone Gyis but for the audience. Or Phone Gyis might have not watched the dance rather seen the dance. :)
4/16/2011 7:24 AM
သုံးဆယ့်ငါးပြား၊ တာစားတဲ့ စနေ ...